Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: Yamuna Clinic Brochure (Burmese)
Yamuna Clinic Brochure (Burmese)
• ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစ၍ နယူးဒေလီမြို့တွင် စတင်ဖွင့်ခဲ့သည်။
• မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အခမဲ့ဆေးခန်း ဖြစ်သည်။
• ဆေးခန်း ကြီးကြပ်သူ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုဆရာမနှင့် ဆေးခန်းလက်ထောက်များ အားလုံးသည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသာ ဖြစ်သည်။
• Proposal ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သည့်ဆေးခန်း မဟုတ်ပါ။
• WCS အမျိုးသမီးများက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စတင်ကြိုးစားခဲ့သည်။
• စတင်တည်ထောင်သူ အမျိးသမီးများ = ဒေါ်မြမြအေး၊ မမာမာအေး၊ မခင်မိုးဆွေ၊ ပီးဘူငီး၊ မနေမြမြဆွေ၊ မခိုင်ခိုင်လွင်၊ မဖြိုးဖြိုးကြိုင်၊ မမော်မော်၊
• စေတနာရှင်များ၏ [အလှူငွေ] + [NLD-LA/WR (တလ ၂၅ဝဝ ရူးပီး၊ ၂ဝဝ၂ တနှစ်တည်းအတွက်သာ)] ဖြင့် စတင်ဖွင့်ခဲ့သည်။
• ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အထိ NHEC မှ တနှစ်တကြိမ် တိုက်ရိုက် ဆေးဝယ်ပေးခဲ့သည်။ (ခန့်မှန်းခြေ တနှစ် ၁ သိန်းဘိုးခန့်)
• ၂ဝဝ၅ မတ်လတွင် UNHCR မှ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် သားဖွါးခန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ ရံဖန်ရံခါ ရေသန့်ဆေး၊ Condom (ကွန်ဒွမ်) နှင့် ဓါတ်ဆားထုပ်များ ပေးသည်။
• သြစတြေးလျမှ Ms Cherry (Enthica) မှ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ် အတွက် ဆေးခန်းလခ ပေးခဲ့သည်။
• ၂ဝဝ၆ အောက်တိုဘာလမှစ၍ ဆေးခန်း-အလှူခံပုံး ထားရှိသည်။
• USA မှ Susan Klimist က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှစပြီး ဆေးခန်းလခ ပေးနေသည်။
• Burma Center Prague မှ Micro-Grant Scheme ၂ဝ၁ဝ မှစပြီးပေးသည်။
• Austrian Burma Centre မှ အခါအားလျော်စွာ အကူအညီ ပေးနေသည်။
• စေတနာရှင်များ၊ တတိယနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများက အခါအားလျော်စွာ လှူဒါန်းကြသည်။
ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ နှင့် ကုသရေး လုပ်ငန်းများ
• အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ စနေ နေ့များတွင် ညနေ (၃) နာရီခွဲမှစ၍ ဆေးခန်းဖွင့်သည်။
• သားဖွား-သားလျောလူနာများအား အချိန်မရွေး လက်ခံမွေးဖွား-ကုသပေးသည်။
• ဆေးခန်းဖွင့်ရက် မဟုတ်သောရက်များတွင် အရေးပေါ် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ကုသရန်အတွက် ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်၍ ကုသပေးသည်။
• သာမန်ခွဲစိတ်မှုများကို အင်္ဂါနေ့တွင် ခွဲစိတ်ကုသပေးသည်။
• အရိုးကျိုးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို (ဆရာဝန်ရှိနေလျင်) အရေးပေါ်အဖြစ် လက်ခံကုသပေးသည်။
• ပြင်းထံသည့် ဝမ်းလျော၊ ဝမ်းပျက်ရောဂါသည်များကို အရေးပေါ်အဖြစ် ကုသပေးသည်။
• အခါအားလျော်စွာ အခြားရပ်ကွက်များသို့၎င်း၊ နယ်စပ်ဒေသများသို့၎င်း၊ သွားရောက် ကုသပေးသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်လူနာများ (၂ဝဝ၆ နိုဝင်္ဘာလမှစပြီး)
• ANC မမွေးမီစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း
• Delivery ကလေးမွေးပေးခြင်း၊
• PNC မွေးပြီးစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း
• Incomplete abortion တရားဝင်-သားပျက်လူနာများ၊
• Family planning မိသားစုစီမံကိန်း (သားဆက်ခြား) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
• ဝါသနာပါ၊ စေတနာရှိ၊ အချိန်ပေးနိုင်မည့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား တတ်သည့် အမျိုးသမီးများအား ဆေးပညာနှင့် သားဖွားပညာများ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးသည်။ ယနေ့အထိ ဆေးခန်းလက်ထောက် ၅၈ ဦး ရှိနေပြီ။
• ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း NHEC အကူအညီဖြင့် First Aid Training ရှေးဦးသူနာပြု သင်တန်း (၃) ခု၊ သင်တန်းသား ၃၂ ယောက်အား ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
• ၂ဝဝ၇ အတွင်း NHEC အကူအညီဖြင့် Traditional Birth Attendant Training (TBA) ရိုးရာလက်သည် မွမ်းမံ သင်တန်း (၁) ခု သင်တန်းသူ ၁၅ ယောက်အား ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
OPV ပိုလီယို အကြောသေရောဂါ၊ Hepatitis B အသဲရောင်(ဘီ)ရောဂါ၊ DPT ဆုံဆို့၊ ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင်ရောဂါ၊ Measles ဝက်သက်ရောဂါ၊ Typhoid အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊ ATT မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများကို (ဆေးရှိစဉ်က) စနစ်တကျ ထိုး/ကြွေးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၁-၂-၂ဝ၁ဝ နေ့မှစ၍ BCG, OPV, ATT နှင့် DPT တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ၈-၉-၂ဝ၁ဝ နေ့မှစ၍ Hepatitis B ကာကွယ်ဆေးပါ ထိုးပေးသည်။
• ဆီးစစ်ပေးခြင်း၊ Urine Albumin
• ဆီးချိုစစ်ပေးခြင်း၊ Urine Sugar
• ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ Urine Pregnancy Test
• Chlorine tablets ရေသန့်ဆေးပြားများ၊
• ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွင်း၊ ဒေလီတွင် DHF ကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်နေစဉ်ကာလက ခြင်ဆေးများ။
• Contraceptives ပဋိသန္ဓေတားဆေးများ၊
• Condom (ကွန်ဒုံး) များ၊
• မိသားစုစီမံကိန်းသုတများကို ဆေးခန်းဆရာမများက အမျိုးသမီး တဦးချင်းအား ပညာပေးခြင်း။
• အသဲရောင်အသားဝါရောဂါ၊ HIV-AIDS ရောဂါ၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ၊ AH1N1 တို့နှင့် ပတ်သက်သော ပညာပေး စာစောင်များကို မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာာသာတို့ဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
• http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ဖြင့် ဆေးပညာ-ကျန်းမာရေး ပညာများဖြန့်ဖြူးနေသည်။
• ကျန်းမာရေးပညာပေးဟောပြောခြင်းများကို VHAD နှင့်တွဲ၍၎င်း၊ NHEC နှင့်တွဲ၍၎င်း၊ Don Bosco Ashalayam နှင့် တွဲ၍၎င်း၊ HIV/ AIDS Peer educators များနှင့်တွဲ၍၎င်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။
• ၂ဝ-၇-ဝ၆ NHEC တွင် VHAD နှင့်တွဲ၍ အသဲရောင်အသားဝါရောဂါအကြောင်းကို လူ (၃ဝ) ဦးတို့အား ပညာပေး ဟောပြောခဲ့သည်။
• ၂၃-၇-၆ BCRC တွင် အသဲရောင်အသားဝါရောဂါအကြောင်းကို လူ (၅ဝ)ဦး တို့အား ပညာပေး ဟောပြောခဲ့သည်။
• ၂၄-၇-ဝ၆ CCF တွင် အသဲရောင်အသားဝါရောဂါနှင့် ခုခံအားကျဆင်းသည့် ရောဂါ အကြောင်းများကို ယမုန်နာနှင့် HIV/AIDS Peer educator ကိုငွေတိုး နှင့်တွဲ၍ ပညာပေးဟောပြောခဲ့ပြီး လူနာ (၅၉)ဦးအား ဆေးကုသပေးခဲ့သည်။
• ၂၇-၇-ဝ၆ NHEC တွင် HIV/AIDS Peer educator ကိုငွေတိုး၊ မခင်မိုးဆွေ တို့နှင့်တွဲ၍ STD လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများ၊ ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ၊ မိခင်နှင့်ကလေးများအတွက် အာဟာရနှင့် ခုခံအား ကျဆင်းသည့် ရောဂါအကြောင်းများကို အမျိုးသမီး (၃ဝ) ဦးအား ပညာပေးခဲ့သည်။
• ၈-၁-ဝ၇ NHEC ၏ အစီစဉ်အရ ဆေးခန်းမှဆရာဝန်နှင့် ဆရာမတို့သည် (Hastal) ရပ်ကွက်တွင် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါများ၊ ဆောင်းရာသီ ၌ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ၊ မိခင်နှင့်ကလေးများအတွက် အာဟာရနှင့် ခုခံအား ကျဆင်းသည့် ရောဂါ အကြောင်းများကို ပညာပေးဟောပြောပြီး၊ လူနာ (၄၄) ဦးတို့အား ဆေးကုပေးခဲ့သည်။
• ၂၃-၃-၂ဝဝ၈ နေ့က Kolkata ရှိ Bodhisukha ဘုန်းကြီးကျာင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက် စာသင်နေကြသည့် မြန်မာ ရဟန်းတော် ၄ဝ ပါးအား HIV/AIDS ရောဂါအကြောင်း ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
• ၂၆-၃-၂ဝဝ၈ နေ့တွင် Kolkata ရှိ ဆရာတော် Rev. Nandawbartha နှင့်အတူ Women Empowerment Program အရ ဒေသတွင်းရှိ အမျိုးသမီး ၅ဝဝ ခန့် အား HIV/AIDS ရောဂါအကြောင်း ၃ နေရာခွဲ၍ ဟောပြောခဲ့သည်။
• ၂၉-၅-ဝ၈ Don Bosco Ashalayam, NHEC/WR တို့နှင့်တွဲ၍ Adolescent Health အကြောင်း ဟောပြောခဲ့သည်။
• ၂၆-၆-ဝ၈ Don Bosco Ashalayam, NHEC/WR တို့နှင့်တွဲ၍ Vector Borne diseases, Malaria နှင့် Nutrition အကြောင်း ဟောပြောခဲ့သည်။
• ၂၂-၈-ဝ၈ Don Bosco Ashalayam, NHEC/WR တို့နှင့်တွဲ၍ Sitapuri ရပ်ကွက်တွင် Reproductive Health အကြောင်း ပညာပေး ဟောပြောကာ လူနာ (၄၂) ဦအား ကြည့်ရှူကုသပေးခဲ့သည်။
• ၅-၅-ဝ၉ CCE Church တွင် Don Bosco Ashalayam နှင့် ပူးတွဲ ပြုလုပ်သည့် ဝမ်းလျော-ဝမ်းပျက်နှင့် အသဲရောင် အသားဝါရောဂါ ဟောပြောပွဲ နှင့် ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း။
• ၆-၅-ဝ၉ BCRC တွင် Don Bosco Ashalayam နှင့် ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် ကျန်းမာရေးပညာပေး ဟောပြောပွဲ။
• ၂၁-၇-၂ဝ၁ဝ၊ ၂၂-၇-၂ဝ၁ဝ၊ ၂၃-၇-၂ဝ၁ဝ၊ ၂၇-၇-၂ဝ၁ဝ နေ့များတွင် Don Bosco Ashalayam နှင့် ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် ကျန်းမာရေး ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်သည်။
• ၅-၆-၇ မေလ ၂ဝ၁၁ နေ့များတွင် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇော်မြို့နေ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို တင်ပြပေးခြင်း
• ၄-၅-ဝ၅ နေ့က UNHCR, VHAD နှင့် UNHCR Geneva တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ခဲ့သည်။
• ၅-၇-ဝ၅ နေ့က Mary Lobo သည် UNHCR အတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူရန် ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ခဲ့သည်။
• ၁၅-၇-ဝ၅ နေ့က San Francisco University မှ ဆေးကျောင်းသား တစ်ဦးနှင့် တွဲဖက်၍ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အမူအကျင့် ပြုပြင်ရေးကို ဆွေးနွေးပြီး၊ ရေသန့်ဆေးနှင့် ရေအိုးများ ဝေငှခဲ့သည်။
• ၂၃-၈-ဝ၅ နေ့က Psycho-social support and mental health care နှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ၏ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကူအညီပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
• ၁၇-၁၁-ဝ၅ နေ့က Ann Burton, UNHCR regional HIV-AIDS technical officer လာရောက်ခဲ့သည်။
• UNHCR နှင့် မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ ညှိနှိူင်းအစည်းဝေးများသို့ တတ်ရောက်ရသည်။
• ၂၁-၂-ဝ၆ တာဝန်ခံ ဒေါ်မြမြအေးသည် Women Clinic meeting တတ်ရောက်ရသည်။
• ၄-၄-ဝ၈၊ ၂၈-၅-ဝ၈၊ ၈-၈-ဝ၈ နေ့များက Don Bosco Ashalayam မှ Stefen Tonsing နှင့် Ms Thui တို့လာရောက် ဆွေးနွေးသည်။
• ၈-၉-ဝ၈၊ ဆေးခန်းတာဝန်ခံ ဒေါ်မြမြအေးသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ကျန်းမာရေး YMCA နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
• ၁၂-၉-ဝ၈၊ UNHCR Senior Regional Public Health & Nutrition Officer for Asia Dr. Herve Isambert နှင့် UNHCR မှတာဝန်ရှိသူများ ဆေးခန်း ဆရာဝန်နှင့် လာရောက် ဆွေးနွေးသည်။
• ၂ဝ-၄-ဝ၉၊ ဆေးခန်းသို့ (၁) Dr. Tabayi from UNHCR and UNHCR officials from New Delhi (၂) Christoph Amthor of Burma Center Prague and team ဧည့်သည်များ လာရောက် ဆွေးနွေးကြသည်။
• ၉-၉-၂ဝ၁ဝ နေ့တွင် UNHCR မှာ တာဝန်ရှိသူများလာရောက်ဆွေးနွေးသည်။
• ၂ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ Burma Center Prague မှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက် ဆွေးနွေးသည်။
• ၁၁-၃-၂ဝ၁၁ St. Stephen College ကောလိပ်တွင် SIFE IIT Delhi team နှင့်အတူ မြန်မာဒုက္ခသည်များ၏ ကျန်းမာရေး ခြေအနေများ သွားရောက် ပြောကြားခဲ့သည်။
• ၇-၅-၂ဝ၁၁ အိုက်ဇောရှိ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစည်းအဝေးတွင် နယ်စပ်ဒေသရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်များ၊ အလုပ်သမားများအတွက် ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
• မိခင်နှင့်ကလေး အာဟာရ ဖြည့်တင်းရေး (ရံပုံငွေရှိလျှင်) ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
• အမှန်တကယ် လိုအပ်သောသူများအာ Bible ကျောင်းတက်ရန်၊ FRRO တင်ရန်၊ UNHCR တင်ရန်၊ ကျောင်း၊ အလုပ် ဆေးခွင့်တင်ရန်၊ အလုပ်ရရှိရန် စသည်တို့အတွက် ဆေးထောက်ခံစာ Birth certificate, Medical certificate, Fit Certificate, Recommendation များထုတ်ပေးသည်။
Clinic assistants (Past and Present)
1. Ma Mar Mar Aye, BU-25, Senior Medic, (Late)
2. Ma Khin Moe Swe (a) Bawi Hnem Tling, BU-303, Senior Medic, (Canada)
3. Ms. Ah Zin, 02IND961, Medic, (Australia)
4. Ma Maw Maw Lwin, BU-198, First Aid Worker, (Australia)
5. Mrs. Lal Rin Thari, BU-187, TBA and First Aid Worker, (Norway)
6. Ms. Sui Hlawn Iang, 06IND531, TBA and First Aid Worker, (Australia)
7. Ms Parte, Traditional Birth Attendant and First Aid Worker
8. Ms. Niang Tawi Lian, 06IND614, First Aid Worker
9. Ms Sentei (a) Hning Than Ruali, First Aid Worker
10. Mr. Bo Nai, 06IND428, Community Health Worker
11. Mr. Kho Boi, 05IND158, Senior Medic
12. Mrs. Dai En Niang, 06IND614, Staff Nurse, (USA)
13. Ms. Nu Boih (a) Vung Suan Man, HCL/07C1039, TBA, First Aid Worker, (USA)
14. Ms. Cing Buah (a) Hau Lam Cing, HCL/07C1051, TBA and First Aid Worker, (USA)
15. Ms. Cing Nem Sian (a) Mann No, HCL/07C1052, TBA and First Aid Worker, (USA)
16. Ms. Ning Khen Cing (a) Cing Lek, under training
17. Ms. Kim Tawi Hau, 07IND757, Under training
18. Ms Cing Dim Zo (a) Zonu, under training
19. Ma Aye Thazin Wai, First Aid Worker
20. Ms Niang Lam Mang, Since 25-7-2009
21. Ms. Cing Kop Lun, HCR/06/IND614, Under training, (USA)
22. Ms Hau Zam
23. Ms Cing Deih Lun, 13-6-09
24. Ms Cing Dim Zo (a) Zonu, Under training
25. Ms Hau Zam, Since last week of May 2009
26. Ms Sanlek, under training, Since December 2009
27. Lam Lun, under training, Since January 2010
28. Mrs. Lal Duh Om, (Auxiliary midwife), Since 11-6-09
29. Mrs. Cing Lam Lun, under training, Since September 2009
30. Ma San San, 07IND524, under training, Since 7-2-2010
31. Cing Khan Man (a) A Mawi, 09C02182, under training, Since January 2010
32. Mr. Ro Kung, 04IND360, Community Health Worker
33. Ms Cing Cingh, Under training, Since 9-8-2010
34. Ma Sanda Win, 04IND247, Since December 2009 (Australia)
35. Ms Thang Sung (Tapi), 08IND673, Under training, Since July 2009
36. Ms Ni Ni (1), 09C1291, Under training, Since 7-10-2010
37. Ms Lin Lin, Under training, Since 27-7-2010 (Australia)
38. Ms Naomi, Under training, Since July 2010
39. Ms Cing Khek, Under training, Since 7-10-2010
40. Ms Cing Nu, 09/2044, Under training, Since 27-7-2010
41. Ms Thian Khaw Taiang (Thiang Te) starts as clinic assistant since 14-7-2011
42. Hau Sian Muang (Muang No), Under training, Since March 2011
43. Ms Niang Lun, 19 1711, Under training, Since 16-10-2011
44. Ms Esther Zopar, 04C00109, since 12-11-2011
45. Ms Ni Ni (2), Under training
46. Ms Aye Aye Aung
47. Ms Amawi
48. Ms Lhing Boi since 5-7-2012
49. Daw Thida Myint, BU-674, Trained Nurse, Since 23-10-2008
50. Roi Moi, Under training, Since March 2011
51. Nu Nu (2), Under training, since 5-1-2013
52. Ms Neng Kho Lam (Si Si), Under training, since 17-7-2012
53. Cing San Lun (Venus), Under training, since 6-9-2012
54. Ms Cheery Phun Mawi, 08IND21, Senior assistant, since November 2008
55. Ms Cho Chong, 08C1038, Senior assistant, since 9-3-2010
56. Nu Nu (1), Assistant, Since 23-4-2011
57. Ko Zaw Than, Community Health Worker, since 5-7-2011
58. Niang Sum (Merry), Assistant, 10C001685, since March 2012
59. Robert Cung, 10/1356, Under training, since 28-4-2012
60. Ms Even, UNHCR # 09/498, Auxiliary midwife, Under training, since 3-1-2013
61. Mrs Cing No, UNHCR # 11/899, since 25-5-2013
62. Mrs Thle Zit, UNHCR # 09/2396, Under training, since 28-5-2013
63. Ms Cing Sum Kim (Kimnu), Volunteers on-call since 30-8-2012
64. Ms Man Lun Mang (Mangnu), Volunteers on-call since 30-8-2012
65. Ms Cing Boi, 10C 00399, since 11-6-2013
အဖြစ်များဆုံး ရောဂါ ၅ မျိုး
(2) အစာလမ်းကြောင်း ရောဂါများ
(3) သွေးအားနည်းခြင်းနှင့် အထွေထွေအားနည်းခြင်း
• ဆေးခန်းတွင် မွေးဖွါးသည့် မွေးလူနာ ၂၈၆ ယောက်၊ (၁၂-၁-၂ဝ၁၃)
• ယောက်ျားလေးစုစုပေါင်း = ၁၃၂ ယောက် (အမွှာ ၁ ယောက်)
• မိန်းကလေးစုစုပေါင်း = ၁၅၂ ယောက်။
• သားဦးကိုယ်ဝန် ၆၇ ယောက်။
• မွေးလမ်းကြောင်းချုပ်ပေးရသူ ၁ဝ၄ (၇၂ + ၃၂) ယောက်။
• မိသားစုစီမံကိန်းအတွက် သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်ပေးရသူ ၁၆ ယောက်။
• သားပျက်ခဲ့၍ သားအိမ်းခြစ်ပေးရသူ ၅ဝ ယောက်။
• တင်ပဆုံပြု၍ မွေးသည့် ကလေးပေါင်း = ၇ ယောက်
အမျိုးသမီး သားကြောဖြတ်ပေးရသူ = ၂ ယောက်
ဆေးခန်းတွင် မွေးဖွါးခဲ့သော မွေးလူနာ ၂၈၆ ယောက်အနက် မွေးဖွါးသည့်အချိန်
• နံနက် ၆ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအတွင်း = ၆၃ ယောက်။
• မွန်းတည့် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအတွင်း = ၉ဝ ယောက်။
• ညနေ ၆ နာရီမှ သန်းခေါင် ၁၂ နာရီအတွင်း = ၆၂ ယောက်။
• သန်းခေါင် ၁၂ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီအတွင်း = ၅၇ ယောက်။
• မွေးလူနာ ၁၄ ယောက်သည် မွေးဖွါးချိန် မှတ်တမ်းမရှိ။